माथिल्लो तामाकोसीको सेयर बाँडफाँट, तपाईलाई कति कित्ता पर्यो ? पुरा जानकारी हेर्नुस !! -
Homeसमाचारमाथिल्लो तामाकोसीको सेयर बाँडफाँट, तपाईलाई कति कित्ता पर्यो ? पुरा जानकारी हेर्नुस !!
दोलखा : स्थानीय वासिन्दाका लागि खुलाइएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) आवेदकलाई न्यूनतम ३० देखि अधिकतम १०२ कित्ता सेयर परेको छ ।
ति कित्ता एक सय दरको तामाकोशीको शेयर सवैभन्दा कम पाउनेले ३ हजारको र अधिकतम पाउनेले १० हजार ३ सय बराबरको शेयर पाएका छन् ।
सेयर निष्कासन गरेको करिब ४ महिनापछि कम्पनीले आवेदनका आधारमा सेयर बाँडफाँट गरेको हो । अति प्रभावित ‘क’ वर्गका ३० कित्तादेखि १०० कित्ता माग गर्ने आवेदकले मागबमाेजिम पाए भने ११० देखि ३०० कित्ता माग गर्नेले १०२ कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । ‘क’ बर्गमा साविक लामावगर र गौरीसँकर गाविस पर्दछ ।
त्यसै गरि ‘ख’ बर्गका ३० कित्ता माग गर्नेले ३० किता ४० कित्ता माग गर्नेले ३२ कित्ता र ५० देखि ३०० कित्ता माग गर्नेले ४८ कित्ता पाएका छन् । ‘ख’ बर्गमा साविक ओराङ्ग, बुलुङ, खारे, लादुक, लामिडाँडा, सुनखानी, सुन्द्रावती, सुस्पाक्षमावती, नाम्दु, गैरीमुदी, भिरकोट, जफे, मालु र शहरे गाविस तथा भीमेश्वर नगरपालिकाको साविक वडा नम्वर १, २, ३, ४ र ७ नम्बर वडा पर्दछन् ।
‘ग’ वर्गका ३० कित्ता माग गर्ने लगानीकर्ताले ३० कित्ता, ४० कित्ता माग गर्नेले ३२ कित्ता र सोभन्दा माथी अवेदन गर्नेले ३४ कित्ता पाएका छन् । ‘ग’ बर्गमा दोलखाको साविक आलम्पु, बाबरे, भेड्पु, भुषाफेदा, विगु, चंखु, क्षेत्रपा, चिलंखा, च्यामा, डाँडाखर्क, ताम्चेतदुधपोखरी, फस्कु, घ्याङसुकाठोकर, हावा, झुले, झ्याँकु, जिरी नगरपालिका, जुँगु, काब्रे, कालिञ्चोक, काटाकुटी, खोपाचाँगु, लापिलाङ, मागापौवा, मार्व, मेलुङ, मिर्गे, पवटी, शैलुङ्गेश्वर, सुरी, बोच, लाकुरीडाँडा र श्यामा गाविस तथा भीमेश्वर नगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ नम्बर वडा पर्दछ ।
शेयर विक्रि प्रवन्धक कम्पनीले दोलखावासीले दिएको आवेदनको शेयर बाँडफाँड गरेपछि बाँकी रहेको १ हजार ५ सय ९८ कित्ता अति प्रभावित ‘क’ बर्गमा परी ३०० कित्ता शेयर आवेदन गरेका ४ हजार १ सय ८६ जना आवेदकलाई गोला प्रथाद्धारा थप १ कित्ता शेयर बाँडफाँड गरेको छ।
शेयर बाँडफाँड पछि आवेदककर्ताको बढी हुन आएको रकम एक साताभित्र व्यक्तिको खातामा फिर्ता हुने आयोजना प्रमुख बिज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखावासीका लागि असार १६ देखि भदौ २१ गतेसम्म १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयरका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने कुल २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्तामध्ये १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता स्थानीयलाई छुट्ट्याइएको सेयरमा २ लाखभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाबाट आवेदन परेको थियो ।
तपाईलाई कति कित्ता पर्यो ? पुरा जानकारी हेर्नुस !!
माथिल्लो तामाकोसीको सेयर भर्ने मिति सर्दै
माथिल्लो तामाकोसीको सेयर संकलन आजदेखि
August 1, 2018 Spnews समाचार 0
काठमाडौं । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखावासीका लागि जारी गर्न लागेको २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बुधबारबाट देखि संकलन सुरु हुँदैछ । पटक पटकको अवरोध र लामो समयदेखिको प्रतीक्षापछि स्थानीयका लागि […]
July 3, 2018 Spnews समाचार 0
दोलखा: चौतर्फी विरोधपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर भर्ने मिति सर्ने भएको छ । तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले आज धितोपत्र बोर्ड र इस्यु म्यानेजरसँग भेट गरी समय सार्न छलफल गर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डले […]